यी हुन् हस्तमैथुनका अचम्म लाग्ने पाँच फाइदाहरु - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
यी हुन् हस्तमैथुनका अचम्म लाग्ने पाँच फाइदाहरु
Posted by Milap Subedi | ५ माघ २०७३, बुधबार १३:५३ |
५ माघ, काठमाण्डौँ । अशिक्षा वा संस्कारका कारण हामीमा यौनबारे धेरै भ्रमहरु छन्, जसले हामीमाथि शासन गरिरहेका छन् । यसले हाम्रो जीवन एकप्रकारको कुन्ठामा बाँचिरहेको हुन्छ । यसै प्रसंगमा हस्तमैथुनबारे हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका अड्कलबाजी र भ्रमहरु रहेका छन् । विशेषज्ञहरुका अनुसार हस्तमैथुन एउटा स्वस्थ यौन जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
हस्तमैथुन भनेको हात वा अन्य कुनै वस्तुद्वारा यौन आनन्द प्राप्त गर्ने तरिका हो । कयौं समाजमा सर्वसाधारणमा यसलाई अनैतिक र हानिकारक मानिन्छ । तर विशेषज्ञको सुझाव भने यसको उल्टो हुने गरेको छ । उनीहरुका अनुसार यसले सुखानुभूति हासिल गर्नुका साथै पुरुष र मिहलाको स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यी हुन् हस्तमैथुनका पाँच फाइदाहरु:
१. हस्तमैथुनका कारण महिनावारीसँग जोडिएका समस्याबाट मुक्ति मिल्दछ । महिनावारीको क्रममा हुने पीडाबाट हस्तमैथुनका क्रममा निस्कने रसायनका कारण राहत मिल्दछ । फिनवर्ग स्कूल अफ मेडिसिनमा स्त्री र प्रसूति रोगकी प्रोफेसर लरा स्ट्रीचर भन्छिन्, ‘हसुतमैथुनका कारण रसिलोपना बढ्दछ र यसबाट योनीको सुख्खापन हट्दछ । यसकारण पीडाबाट मुक्ति मिल्दछ ।’
२. पत्रिका ‘सेक्शुअल एण्ड रिलेशनशिप थेरापी’ का अनुसार यसबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्दछ र यसले संक्रमणबाट बचाउँछ । जुन मानिसलाई उत्तेजना अधिक हुन्छ उनमा इम्युनोग्लोबिन ए को मात्र अधिक हुन्छ, यसले ज्वरोबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । यो तथ्य कयौ‌ं अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको हो ।
३. फ्रेन्च इन्स्टिच्यूट अफ हेल्ड एन्ड मेडिकल रिसर्चको अनुसन्धानका अनुसार हस्तमैथुनपछि थकाइको निद्रा लाग्छ । अनिद्राको समस्याबाट ग्रस्त मानिसहरुको लागि सबैभन्दा सुरक्षित र उत्तम उपाय (खासगरी पुरुषका लागि) हो । किनकी हस्तमैथुनपछि पुरुषको यौन इच्छा सकिन्छ र आनन्दित महसुस हुन्छ ।
४. यसबाट शारीरिक र मनोवज्ञानिक स्तरमा आनन्दानुभूतिको महसुस हुन्छ ।
५.आमरुपमा मानिसहरुलाई भ्रम छ कि हस्तमैथुनको यौन सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्दछ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यो पूरै गलत मान्यता हो । सही कुरा यसको उल्टो हुन्छ । हस्तमैथुनका कारण बरु एक असल र आनन्ददायक यौन सम्बन्ध बनाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ । यसका साथै उत्तेजनामा नआउने समस्या भएका महिलाहरुलाई त झनै मद्दत पुग्दछ ।
Previousलागूऔषध चरेसका कारोबारी सातवर्षपछि पक्राउ
Nextआँखा अस्पतालमा भारतीय नागरिकको घुइँचो
यु १५ साफ च्याम्पियनसिप : समूह ‘ए’का बंगलादेश र श्रीलंकाबिच खेल हुँदै
२ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०८:१५
‘वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरु नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्छ’ : एमाले (लाईभ)
११ माघ २०७४, बिहीबार १७:२१
२१ माघ २०७३, शुक्रबार १६:०३
मंगलवारदेखि पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ—मुग्लिन सडक सुचारु
२८ भाद्र २०७४, बुधबार १२:३७